ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Yantai Haicheng Sanitary Products Co. , Ltd.
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများ (N95)၊ တစ်ခါသုံးဆေးမျက်နှာဖုံးများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုမျက်နှာဖုံးများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအထီးကျန်အဝတ်အစားများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်မှုအဝတ်အထည်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်မှန်တပ်ခြင်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုလက်အိတ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်လက်အိတ်များ၊ အပူချိန်သေနတ်များစသည်တို့ပါဝင်သည်။
Yantai Haicheng Sanitary products Co. , Ltd. သည်လှပသောပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့ကြီးဖြစ်ပြီး၊ ပထဝီအနေအထားကောင်းမွန်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေပါသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်ပိုးသန့်ဆေးနှင့်သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အထူးပြုသည်။ ၁၇ နှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီးတွင်ပိုးသတ်ဆေးများနှင့်ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးများ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူထုတ်ကုန်များ၊ ပိုးသန့်ဆေးသန့်စင်စက်များနှင့်စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများသာမကဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပေးသွင်းသူများဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၁၀၀၀၀၀ တန်း GMP သန့်စင်ခြင်းအလုပ်ရုံနှင့်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများရှိသည်။ ၎င်းတွင်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အချင်းလိုင်စင်၊ စီးပွားရေးလိုင်စင်နှင့်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များကိုစမ်းသပ်ခြင်းအစရှိသည်တို့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM နှင့် ODM များကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ ယ်သူများအားကမ္ဘာတဝှမ်းရှိလူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုနေ့စဉ်ဘဝအသက်တာ၏လိုအပ်ချက်များအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
လက်ရှိတွင်ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ဆေးများအားလုံးသည်ရေပန်းစားသည်။ ၇၅% အရက်ပိုးသတ်ဆေး၊ လက်သန့်စင်ဆေး၊ လက်ဆပ်ပြာ၊ အဝတ်လျှော်ဆေးသန့်စင်ဆေး၊ ပါးစပ်ဆေးဆေး၊ ကလေးပုလင်းသန့်ရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်၊ , အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုးသတ်ဆေး, ဆံပင် tonic, အားကစားသမားရဲ့ခြေ, formaldehyde scavenger, အပင်ကြီးထွားအာဟာရဖြေရှင်းချက်, အနုတ်လက္ခဏာအိုင်းရေ, etc
Wipes ထုတ်ကုန်များတွင် ၇၅% အရက် wipe များ၊ အရက် pad၊ သန့်ရှင်းရေး wipe, Baby wipe, မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေး wipe, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် wipes, အိမ်သုံးဆိုဖာ wap, မိုဘိုင်းဖုန်း wipe, မျက်မှန်သုတ်, စက်မှု wipe ။
Multi-function ကိုဝါဂွမ်းတစ်သျှူးထုတ်ကုန်များကိုဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ၂၀ မှ ၁၀၀ အထိကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုထုပ်ပိုးခြင်း၊ ခြောက်သွေ့။ စိုစွတ်သော dual-use, aseptic ထုတ်လုပ်မှုသာမကပုံနှိပ်ခြင်းဒီဇိုင်းအတွက်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဆန်းသစ်သောပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုတိုက်ကြီးအားလုံးသို့တင်ပို့ပြီးဖြစ်သည်။ ဂျပန်၊ ဥရောပ၊ အမေရိကန်စသည့်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများနှင့်လည်းနက်ရှိုင်းသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုညှိနှိုင်းရန်၊ ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရှာဖွေရန်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုရန်အားထုတ်မှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၀ ယ်သူများကိုကြိုဆိုပါသည်။
၁. မြင့်မားသောအရည်အသွေး ကုန်ပစ္စည်းလိုင်စင်ဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးအာမခံချက်ကိုပြီးပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်။
၂။ ပထမတန်း စက်ပစ္စည်း အလိုအလျောက်ပုလင်းတံဆိပ်ကပ်စက်၊ အလိုအလျောက်ပုလင်းထုပ်စက်၊ အလိုအလျောက်အရည်ဖြည့်စက်၊ အလိုအလျောက်စိုစွတ်သောခေါက်ထုပ်ထုပ်စက်၊，ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစစ်ဆေးပါ.
4.24- နာရီဝန်ဆောင်မှု ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၂၄ နာရီအွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုရှိသည်။
5.ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်စဉ်းစားဟန်ရှိသောဖောက်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအထူးပြုထားသောကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည်။
အလိုအလျောက်ပုလင်း capping စက်
ကုမ္ပဏီသည်တရုတ်ပိုးမွှားနှိမ်နင်းသည့်လုပ်ငန်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင်နှင့်ထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုကိုရရှိခဲ့ပြီး ISO9001 International Quality Management System Certificate ကိုရရှိခဲ့သည်